Golihii ugu horreeyay ee Wasiiro ah ayaa laga dhisay dalka Mali afgambgii kadib. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Golihii ugu horreeyay ee Wasiiro ah ayaa laga dhisay dalka Mali afgambgii...
Golihii ugu horreeyay ee Wasiiro ah ayaa laga dhisay dalka Mali afgambgii kadib.
Madaxweynaha ku meel gaarka ah ee dalka Mali, Bah Ndaw, ayaa ku dhawaaqay Gole wasiiro oo ka kooban 25 xubnood waxaana ka soo muuqday liiska golahan saraakiil sar sare oo militriga ka tirsan kuwaas oo xilal muhiim ay qaban doona.
Digreetada Madaxweynaha oo laga akhriyay Telefishinka dowladda ayaa waxaa lagu sheegay in wasiirada, Gaashaandhigga, Amniga, arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta qaban doonaan saraakiil ka tirsan militiriga.
Col Sadio Camara, oo kamid ahaa saraakiishii hogaamineysay afgembiga ayaa noqon doona wasiirka difaaca, iyadoo afhayeenkii afgembiga Col-Maj Ismaël Wagué, loo magacaabay wasiirka dib u heshiisiinta qaranka.
Jagooyinka muhiimka ah ee loo dhiibay rayidka waxaa kamid ah xeer ilaaliyihii hore Maxamed Sidda Dicko oo loo magacaabaay waaxda garsoorka. Golaha wasiirada cusub afar dumar ah keli ah ayaa ku jira oo labo kamid ah ka tirsan yihiin dhaq dhaqaaqa mucaaradka ah ee M5 oo horkacayay banaan baxyadii xukunka looga tuuray Madaxweyne Ibrahim Boubacar Keïta.
Previous articleNigeria oo baareysa xad gudubyo ay ku kaceen ciidankeeda gaarka ah.
Next articleKumaandoosta Gorgor oo burburiyey saldhigyo ay leeyihiin argagixisada.